Ungachinja sei zviri nyore browser reSafari pane iyo iPhone | IPhone nhau
Ungachinja sei zviri nyore browser reSafari pane iyo iPhone
Imwe yesarudzo isu yatinowana kwenguva yakareba ndeye chinja injini yekutsvaga yeGoogle pane yedu iPhone, iPad kana iPod Kubata. Iyi ndeimwe yesarudzo idzo dzataive tatoona muActualidad iPhone, asi nhasi tave kuzozvirangarira.
Mune ino kesi, iyo inouya zvoga ndiyo inobva kuGoogle, asi isu tinogona kushandisa imwe kubva kuYahoo, Bing, DuckDuckGo kana kunyange Ecosia. Iyi sarudzo inosarudzwa nevashoma vashandisi asi izvo zvinonakidza kufunga nezvazvo kana iwe uchida kuchinja uye kurega kushandisa Google.
Sarudzo dzekuita shanduko iyi dziri nyore kwazvo uye hatizove nedambudziko kuzviita. Kana injini yekutsvaga yashandurwa pese patinopinda muSafari, iyo inosarudzwa nemushandisi ndiyo inoshandiswa kwete iya yeGoogle. Kune izvi isu tinofanirwa tsvaga maSystem eiyo iPhone yedu, wobva wasvika paSafari uye nekukwirisa kumusoro paKutsvaga. Mumufananidzo unotevera tinokuratidza iwe:
Iye zvino unogona kunakidzwa neimwe browser kupfuura Google, saka usazeze kuyedza simba remamwe mabhurawuza atinowana mune Safari marongero. Mukati meiyi Safari sarudzo isu tine dzimwe sarudzo uye marongero aripo senge Autofill, iyo nzvimbo ichawanikwa edu kurodha pasi kubva kubhurawuza pachayo uye nevamwe vazhinji.
Kuchinja bhurawuza ndechimwe chinhu chaunofanirwa kuyedza imwe nguva kuti uone kuti hazvisi zvese zvinoenderana neGoogle, kunyangwe chiri chokwadi kuti zvese zvakafanana, vamwe vashandisi vanozeza kushandisa Google. Zvikonzero zvako zvichave kuti ini pachangu ndinoishandisa nguva dzose asi dzimwe nguva ndinoshandura yekusiyana kwekutsvaga kana kuona misiyano. Wati wamboedza imwe browser pane yako iPhone?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Ungachinja sei zviri nyore browser reSafari pane iyo iPhone
Ini parizvino ndinoshandisa Opera pachinzvimbo cheSafari, kuyedza kudzikisa kushandiswa kwedata.
Apple yakavhiringidza mazana ezvigadzirwa zveiyo nyowani AirPods Max
Apple inosimudzira iyo Tehran nhepfenyuro nemavhidhiyo Kukurukurirana ine chaiyo spy